Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Myths မဟုတ်တာတွေ ပြောကြရအောင်
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ ကျွန်မအသက် ၂၆ နှစ်ပါ အိမ်ထောင်မရှိအပျိုပါ ရာသီမှန်ပါတယ် အစာအိမ်ရောဂါရှိပါတယ် အစာအိမ်ရောဂါရှိသူများ ရဲယိုသီးစားလို့မရဘူးဆိုတာဟုတ်ပါသလားရှင်
၂။ ဆရာရှင့် သမီးတခုလောက်မေးပါရစေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာ မိတ္တူကူးစက်မှာ မိတ္တူမကူးရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ပါသလားရှင့် ကလေးကိုထိတတ်တယ်လို့ပြောနေလို့ပါရှင့် ကျေးဇူးပြု၍ဖြေပေးပါဆရာရှင့်
၃။ ကျွန်မ အသက် ၂၅နှစ်ပါ။ ကလေးက ၃လသားလေးပါ ဆရာရှင့်။ ကလေးကို ၆လအထိ မိခင်နိ့တမျိုးတည်း ဆရာဝန်တွေက တိုက်ခိုင်းပါတယ်။ မိခင်ကိုလည်း အသီးအရွက်အစုံစားခိုင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆရာ ကျွန်မတို့ မိဘတွေက ရှေးလူကြီးတွေဆိုတော့ ကလေးကိုထမင်းကြိတ်ပြီးခွံ့ခိုင်းပါတယ်။ ထမင်းကျွေးမှခြင်ကိုက်ယင်ကိုက်ခံမှာလို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါမှန်လားဆရာ ရေလည်းတိုက်ခိုင်းပါတယ်ကလေးဆီးပူလို့တဲ့ တိုက်သင့်လားဆရာ။ အသီးအရွက်စားရင် လေပါလို့ဆိုပြီး သိပ်မစားခိုင်းဘူး။ အစားရှောင်ခိုင်းပါတယ။် အသီးအရွက်စားတဲ့နေ့ဆို လေဆေး ဦးစိန်ခိုဆိုတဲ့ဆေး တိုက်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မကလည်းကလေးကိုအမြဲဆေးမတိုက်ချင်ပါဘူး အဲဒါဘယ်လိုလုပ်သင့်လည်းရှင်းပြပေးပါဆရာ ကလေးကို ၆လအထိ နို့တမျိုးပဲတိုက်ရင် ဘာတွေကောင်းလဲဆိုးလဲဆိုတာကို ရှင်းပြပေးပါ။ ကလေး ဆီးပူတာကရော စိုးရိမ်ရလား ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါနော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ ကျမ အိုဂျီက ဘာစားပါ ဘာရှောင်ပါလို့ တခါမှမပြောဖူးလို့ပါဆရာ။ ဖြေပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။
၅။ ဆရာခင်ဗျာ။ မိခင်စားသော အစားအစာမှ နို့စို့နေသော ကလေးငယ်ကို effect ဖြစ်စေပါလားဆရာ။ ဥပမာ မိခင်က မျှစ် မျှစ်ချဉ်၊ ကြက်ဟင်းခါးသီး၊ ဒညင်းသီးစားလို့ ကလေးကို နေမကောင်းတာတခုခု ဖြစ်စေတာမျိုး၊ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်စေတာမျိုး။ မိခင်က paracetamol, burmeton သောက်လို့ ကလေးကို effect ဖြစ်စေတာမျိုးတွေ ရှိပါလားဆရာ။ နောက်တခုက မိခင် ပက်လက်လှန် အိပ်လို့ နို့ခမ်းစေတာမျိုးဆိုတာရော ဟုတ်ပါသလားဆရာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
၆။ လသားခလေးတွေနဲ့ပါတ်သတ်လို့ တချို့အယူအဆတွေကြားနေရတာ မှန်မမှန်သေချာမသိရတာမို့ မေးပါရစေရှင့်။
ကျွန်မခလေးကခုဆို၂လနဲ့၉ရက်သားပါရှင် ခြေထောင်ကိုပြင်ခိုင်းကြပါတယ်။ မပြင်ရင် ခွင်မယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်ဖြေပေးပါရှင်။ ခလေးခြေထောက်ကို ရမ်းသမ်းလုပ်မိရင် ပိုဆိုးမှာစိုးလို့ပါ။ နောက်တခုက ခလေးတွေကို ဂတုံးရိတ်ပေးတာပါ မရိတ်ပေးရင် ခေါင်းလေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားဆရာ။ ပီးတော့ ၃-၄ ရက်နေမှ ဝမ်းသွားရင် ခလေးဘာဖြစ်လို့ပါလဲ။ မိခင်ကဆေးအစား မန်ကျည်းဖျော်ရည်လိုမျိုး သောက်ရင်ရော ရပါသလားရှင်။ ဖြေပေးပါဦးဆရာ။ သားသားမမွေးခင်ကရော သိချင်တာတွေကိုမေးမြန်းဖူးပါတယ်။ ဂရုတစိုက် ဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။
5. Breast Milk Storage နို့ရည်ကို ဘယ်လိုထားသိုမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/breast-milk-storage.html
6. Breast Milk Supply နို့ထွက်နည်းနေရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/breast-milk-supply.html
7. Breastfeeding linked to higher IQ မိခင်နို့တိုက်လျှင် ကလေးဥာဏ်ရည်မြင့် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/breastfeeding-linked-to-higher-iq.html
8. Common Cold in children ကလေးတွေ အအေးမိရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/common-cold-in-children.html
9. Contraceptives and breastfeeding ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ နှင့် ကလေးနို့တိုက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/contraceptives-and-breastfeeding.html
11. Diet forabreastfeeding mom (1) နို့တိုက်မိခင် ဘာစားချင်လဲ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/diet-for-breastfeeding-mom-1.html
12. Diet forabreastfeeding mom (2) နို့တိုက်မိခင် ဘာစားချင်လဲ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/diet-for-breastfeeding-mom-2.html
13. Digestive Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/digestive-myths.html
14. Fever First Aid အဖျားရှိသူ ရှေးဦးသူနာပြုနည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/07/fever-first-aid.html
15. Food Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/digestive-myths.html
16. Gripe Water ကလေး လေဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/gripe-water.html
17. Hepatitis B and breastfeeding အသဲရောင် ဘီ ပိုးရှိသူ မိခင် နဲ့ ကလေးနို့တိုက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hepatitis-b-and-breastfeeding.html
18. HIV-AIDS Myths and Facts (အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ-အေအိုင်ဒီအက်စ်) အထင်မှား နဲ့ အမှန်တရား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/myths-and-facts-hivaids.html
19. Medicines for babies ကလေးနဲ့ ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/medicines-for-babies.html
20. Miscarriage Prevention ကိုယ်ဝန်မပျက်အောင် https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/miscarriage-prevention.html
21. Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/miscarriage.html
22. Missed abortion ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်းတမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/missed-abortion.html
23. Mother’s words of wisdom အမေ့စကား https://doctortintswe.blogspot.com/2017/05/mothers-words-of-wisdom.html
24. Myth About Babies ကလေးငယ်အတွက် မေးခွန်းများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/myth-about-babies.html
25. Myth တခါမှ မကြားဖူးသေး https://doctortintswe.blogspot.com/2018/04/myth.html
26. Myths about menstrual cycle ရာသီလာခြင်း အရိုးစွဲအယူအဆများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/myths-about-menstrual-cycle.html
27. Myths about menstrual cycle ရာသီလာခြင်း အရိုးစွဲအယူအဆများ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/myths-about-menstrual-cycle.html
28. Myths of Pregnancy and Postpartum မီးတွင်းကျန်းမာရေး အယူအဆအမှားများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/myths-of-pregnancy-and-postpartum.html
29. Myths အယူအဆ အလွဲများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/11/myth-about-babies.html
30. Newborn baby and Water ကလေးကို ရေဘယ်တော့တိုက်မလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/newborn-baby-and-water.html
31. Newborn baby ကလေးမွေးတော့မယ်ဆိုရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/newborn-baby.html
32. Old wives' tale မိန်းမကြီးများပုံပြင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/10/old-wives-tale.html
33. Papaya During Pregnancy သင်္ဘောသီးနဲ့ ကိုယ်ဝန် မေးခွန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/blog-post_88.html
34. Shaving Baby's Head ကလေးခေါင်းရိတ်သင့် မသင့် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/11/shaving-babys-head.html
35. Supplementary foods ကလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/supplementary-foods_18.html
36. The Salt Myth ချိုချင်ပါလျက် ဆားတပွင့်ကဖျက် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/the-salt-myth.html
37. Tonics for Children ကလေးအားဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/tonics-for-children.html
38. Vomiting in babies ကလေးတွေအန်ရင် https://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/vomiting-in-babies.html
39. Weaning ကလေးကို နို့ဘယ်တော့ဖြတ်မလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/weaning.html
40. Wrapping babies မွေးကာစကလေးကို အနှီးဝတ်နဲ့ပတ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/wrapping-babies.html
41. နို့တိုက်နေတဲ့ကလေးတွေကို ၆ လ အထိ၊ ကိုယ်ပူနေလည်း ဘာကြောင့်ရေမတိုက်သင့်သလည်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/02/why-cant-we-give-water-to-breastfeeding.html